ဗီဒီယို - Startup များအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှု Martech Zone
နောက်ဆုံးတော့သင်ဟာသင့်ရဲ့ startup ကိုမြေပြင်ပေါ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်မည်သည့်ရှာဖွေမှုရလဒ်မှသင့်ကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ငါတို့က startup တွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဒါကကြီးမားတဲ့ပြisနာပဲ။ ရှာဖွေခြင်းတွင်ရှာဖွေခြင်းသည်အပြင်ထွက်အဖွဲ့တစ်ခုကိုငှားရမ်းခြင်းထက် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။ သို့သော်ဂူဂဲလ်သည်ဒိုမိန်းအသစ်တစ်ခုကိုအလွန်ကြင်နာမှုကင်းမဲ့သည်။ ဒီဗီဒီယိုမှာ မေးလ် Ohye ဂူဂဲလ်မှသင်ကူညီရန်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးထားသည်။
www - သင်ကြိုက်နှစ်သက်မလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါ www နှင့်အတူစတင်ရန်သို့မဟုတ်မဒိုမိန်း။ အသွားအလာကိုသင်ရွေးချယ်သောလမ်းကြောင်းသို့ 301 (အမြဲတမ်း) ပြန်ညွှန်းခြင်းသေချာပါစေ။
webmaster များ - သေချာအောင်လုပ်ပါ သင်၏ဒိုမိန်းကို Google Search Console Tools ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပါ သင်၏ဆိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြissuesနာရှိမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
သတိပေးချက်များ - Maile ကအကြံပြုသည် Webmaster သတိပေးချက်များတက်သည်လက်မှတ်ထိုး သင့်ဆိုဒ်နှင့်ပတ်သက်သောပြanနာတစ်ခုစီတိုင်းကိုသင်အကြောင်းကြားရန်
ဒိုမိန်း - သင့်ဒိုမိန်းကိုနောက်ခံစစ်ဆေးခြင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီဆိုက်သည်ပြtroubleနာမရှိကြောင်းသေချာစေရန်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ spam များ၊ malware များ၊ မသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများ…ထိုပြissuesနာများသည်သင်၏အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းခံရရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပြproblemsနာများရှိပါကဒိုမိန်းကိုပိုင်ရှင်အသစ်မှထိန်းချုပ်သည်ဟု Webmasters မှတစ်ဆင့်သင်ဂူဂဲလ်ကိုအကြောင်းကြားနိုင်သည်။
ဆွဲယူ - ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများအတွင်း၊ သင်၏စာမျက်နှာများကိုရယူပါ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်သင့်ဆိုဒ်ကိုတွားသွားစေသောအခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်။
Submit - ပြသနာမရှိလျှင်စာမျက်နှာကို Google သို့တင်ပါ။ သင်သည်သင်၏ site ကိုတစ် ဦး နှင့်အတူတည်ဆောက်လျှင် အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ အသစ်သောသို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းထားသောအကြောင်းအရာကိုသင်ထုတ်ဝေသည့်အခါတိုင်း၊ CMS သည်သင့်အတွက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
analytics - ထည့်ပါ analytics သင်၏ site မှအရေးကြီးသောအချက်အလက်များကိုစတင်စုဆောင်းနိုင်အောင်သင့် site ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းနှင့်ရလဒ်ပေါ်အခြေခံပြီးတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း။ သင် Google Analytics ကိုသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ သင့်မှာရှိသည့် Webmaster၊ ငွေပေးချေမှုရသည့်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုရေးအချက်အလက်များကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။ analytics ပလက်ဖောင်းမပါဝင်နိုင်ပါ။
ပုံစံ - သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ ဦး တည်သော web ဗျူဟာတစ်ခုကိုတီထွင်ပါ။ ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်မှု၊ စိတ်ကူးတစ်ခုအတွက်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းတို့သည်သင့်ကိုပိုမိုသွားလာစေနိုင်လိမ့်မည်။
ပြောင်းလဲမှု သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အလားအလာများကိုဖောက်သည်များအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်သို့မဟုတ်လက်ရှိဖောက်သည်များထံမှထပ်မံရောင်းအားများကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏ site အတွက်ပြောင်းလဲမှုများကိုသေချာစွာသတ်မှတ်ထားရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုင်းတာမှုအတွက်ထည့်သွင်းပါ Google Analytics ပြောင်းလဲခြင်းခြေရာခံခြင်း.
keywords - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်စာမျက်နှာများကိုသူတို့နားလည်နိုင်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ရည်ညွှန်းသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်သော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေရာတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများရယူပါ သင်၏ကွန်ရက်အတွင်း၌သော့ချက်စာလုံးများကိုထိရောက်စွာအသုံးချပါ.
အရှိန် - သေချာအောင်လုပ်ပါ site သည်မြန်ဆန်သည်။ အနိမ့်ဆုံးကုန်ကျမည့်အိမ်ရှင်ကိုမရွေးပါနှင့်၊ သူတို့သည်သင်၏ကွန်ရက်ကိုသင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်သင့် visitors ည့်သည်များ၏စိတ်ရှည်မှုနှစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေမည့်မျှဝေထားသော crappy ဆာဗာတစ်ခုတွင်တင်ထားတော့မည်။
အလားအလာရှိသော SEO အန္တရာယ်
SEO ဆိုသည်မှာ - အရိပ်ရသည့် SEO အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခြင်းသည်သင်၏ site အတွက်ကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ နားလည်ပြီးလိုက်နာသည့်အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းပါ ဂူဂဲလ်၏ဝန်ဆောင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ.
နောက်ကြောင်းပြန် - Pagerank တိုးမြှင့်နိုင်ရန် link link များသို့မဟုတ် link များဝယ်ခြင်း။ SEO ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ရာထူးကိုတည်ဆောက်ရန်ဤနည်းသည်မကြာခဏဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကိုဖြန့်ဝေရန်သူတို့ကိုသင်ပေးသည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ထိုအကြောင်းအရာ၌ link များထည့်နိုင်သည်။
ရိုးရှင်း - စာဖတ်သူနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အသုံးပြုသူအားသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြသည့်ရိုးရှင်းသော site ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ရှုပ်ထွေးသောဆိုဒ်များသည်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်၊ ဆိုက်ကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကသင်၏အကြောင်းအရာကိုပိုမိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည့်သော့ချက်ကျသောအကြောင်းအရာများကိုဖုံးကွယ်နိုင်သည်။
ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်သင်၏ site ၏လူကြိုက်များမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ဂူးဂဲလ်ကသာသင့်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့သော့ချက်စာလုံးအတွက်နံပါတ်တစ်နေရာကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များပေါ်တွင်မြင်နိုင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်သည့်စာမူများနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်သင်၏ URL ကိုဖြန့်ဝေရန်သေချာစေပါ။ သင့်ဆိုဒ်ကိုဂူဂယ်လ် + အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ Facebook၊ LinkedIn, Twitter နှင့်သင်၏အလားအလာများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၊
Tags: လင့်များရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းအဆင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationစတင်များအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစတင်များအတွက် seoစတင်
သင်၏ SPF မှတ်တမ်းတွင်ဒိုမိန်းအမြောက်အများ